I-Cartography - iGeofumadas
Izicelo nezisetshenziswa isayensi okhuluma cwaningo kanye nokuthuthukiswa amabalazwe ezindawo.
Qhathanisa ubukhulu bamazwe
Besilokhu sibheka ikhasi elithokozisa kakhulu, elibizwa ngokuthi yi-theruesizeof, belisenetheni iminyaka ethile futhi kulo - ngendlela exhumana kakhulu futhi elula - umsebenzisi angenza ukuqhathanisa indawo engaphezulu kwezwe elilodwa noma amaningi. Siyaqiniseka ukuthi ngemuva kokusebenzisa leli thuluzi lokuxhumana, uzoba ...
I-EOS ikuvumela ukuba wenze imisebenzi yokucubungula isithombe kusiphequluli
Iningi lemisebenzi yokuhlaziywa kwesithombe ebidinga isoftware i-Erdas Imagine noma i-ENVI manje isibonga online ku-EOS Platform. Le sevisi entsha yamafu eqalwe yi-EOS Data Analytics eya kubachwepheshe be-GIS isisombululo esibanzi sokusesha, ukuhlaziya, ukugcina nokubona okukhulu ...
Ngaphambilini: Ukunakekela konke okuphathelene nejografi kanye nokwenziwa kwamabalazwe ezweni ngalinye kudale ukwakhiwa kwama-ejensi kahulumeni aphethe lo msebenzi obaluleke kangaka. Kwezinye izimo kuya nge-Ministry of Defence noma enye ngokuya ngeshadi lenhlangano yangaphakathi yezwe ngalinye, lolu hlobo ...
Itholakala Mahhala - Isifanekiso sokuguqula izixhumanisi ze-UTM ziye eGeographic
Isipesheli sesikhathi esincane
Amathuba amaningi okusebenzisa i-Web GIS okwamanje
Isihloko sokuphawula namhlanje yi-Web GIS. Okwe 'uninitiated', kungavele kuhunyushwe njenge-'GIS kuwebhu ', kepha lokhu kusho ukuthini ngempela? Yiziphi izilinganiso zayo? Kungani 'inamathuba amaningi okufaka isicelo' njengoba kushiwo esihlokweni salokhu okuthunyelwe? Kunezizathu ezinhlanu u-Eric van Rees azisebenzisayo ku ...
Le yindatshana ethokozisayo kaRegis Wellausen eshicilelwe kwiMundoGEO Magazine, esikhumbuza ngokungaguquguquki kwalezo zimemezelo zeCatastro2014 eziphakanyiswe yi-FIG eminyakeni engamashumi amabili eyedlule, ikakhulukazi maqondana nokumodela njengokufaka indawo yokudweba imidwebo yendabuko. Isiphakamiso sesixazululo sesimo sokushintshwa kwepharadigm yokuguga.…
Usayizi weqiniso wamazwe
thetruesize.com isayithi elithakazelisayo, lapho amazwe angatholwa khona kusibukeli seGoogleMaps. Ngokuhudula izinto, ungabona ukuthi amazwe ahlanekezelwe kanjani nomehluko kububanzi. Njengoba kukhonjisiwe esithombeni, ukuqagela okuyindilinga, lapho kuzanywa ukubonakala endizeni kuphoqa ...
Cartografia, -Google Earth / Amamephu
25,000 emhlabeni wonke amamephu etholakalayo thwebula
Iqoqo le-Perry-Castañeda Library Map Collection iqoqo elihlaba umxhwele eliqukethe amamephu angaphezu kwama-250,000 askenwe futhi enziwa atholakalela ku-inthanethi. Iningi lala mabalazwe lisezindaweni zomphakathi futhi cishe angama-25,000 ayatholakala njengamanje. Njengesibonelo, sikhombisa amanye amamephu atholakala ku ...
Cartografia, Ukufundisa CAD / GIS, Inthanethi kanye Amabhulogi